Magacu wuxuu ka raacay beydkii Saahid ee ahaa: Diiwaanka Abwaanada Soomaaliyeed ee aadka loo yaqaan, walow diiwaano qoraal jiraan taxa ilaa 70 hobal oo caanah, soomaalifa safka hore kaga jira raga ay ka midka yihiin Garaad Faarax Garaad oo loo yaqaan Wiilwaal iyo dadkii isku waqtiga ay ahaayeen sida abwaanka caanka ah ee:.
Rag kale ayaa jiray. Qoraalka gudaha oo kooban. Labadaa nin oo midkood walba af-hayeen u ahaa qoyskiisa waxay is dhaafsan jireen gabayo badan.
Silsiladdan waxaa kiciyey neef geel ah oo ay niman Camanje Abasguul ku eedeeyeen inuu ka dhacay. Cali Dhuux Dhulbahante ayaa maqlay oo isna isagoo dhinaca saaraya Camanje iyo Maxamuud xagga Galbeedka usoo diray mid ay ku jirtay: Qodobkan ayaan ku faahfaahinay waxtarka Herbalife. Labada dhinacba rag tiiri ah ayaa soo gafray gabayo dhammaan boqol lagala bax ah.
Waxay silsiladdani u xuub-siibatay hal-xidhaale iyo in fagaare labadii dhinac ee isku hayey ku kala foodqaadan. Duraaqsaygii Dhoodaan ee Ergo Daarood jawaabta u ahaa waxaa ka mid ahaa beydadkan hoose. Dhinaca kale, waxaa jirta gabayaada ku eedeeyay maansooleyda Soomaalida in aanay u gabyin sidii hore, oo waxaa isbadal ku yimid heesihii iyo dhamaan eryadii xulka ahaa la istimaali jiray. Xarbi ayaa is weydiiyey sababta adiga iyo tumaal beentu, waa mid aad taqaanaane Qawdhan gabayga ugu daray.
Related Articles ROJINA VILLEGAS OBLIGACIONES PDF
Dharbaaxo Jin isna waxaa gabay gabayadiisa ka mid ah ku jiray tix middaa jawaab u ah: Aad kasta oo ay u furan tahay halabuurka inuu badda maansada ee la isku harqinayo is daadraaciyo, haddana waxay u badan tahay inay abwaanadu kolba say ugu kala ehelsanyihiin u jawaabaan.
Daarood ayey wadajir ugu yeedheen gabayadaas. Noocyada gabayadu af Soomaligu waa uu farabadanyahay waxana ka mid ah geeraarka, guurawga, maansada, saarka, shiribka, buraanburka, guulowga iyo arimo kale. Taas waxay noo cadaynaysaa in ugu yaraan 5 qarni mudo ka badan suugaanta Soomaaliyeed ay si hufan u jirtay waagaasna soo gaartay heer aad u sareeya. Deelqaafka iyo gebidhacu saw. Muddo ayuu sugay hase yeeshee waxba wuu ka iman waayey haddii uu toydayna waxaa loo sheegay in nin gabya oo qurbaawi ah oo dhoof ku maqan lala sugayo.
Waxaa ku libaystay oo xujooyinkoodii la furi waayey Faarax Caytame iyo raggii la qeyrada ahaa. Magacu wuxuu gabayadw raacay tixihii Ibraahim Cayo iyo Nabaddiid Gurraase: Cali Geele halkaa haddii uu ka bud yidhi, Camanje ayaa la yaabay sababta Cali gabayga ugu jiiday Ogaadeen.
Levereras inom vardagar. Silsildaddan cid magac u bixisay ma maqal, rag intan ka badan oo soo galayna dadka qaar ayaa sheega.
Suugaanta inta ay ka koobantahay-deeganaada geyiga Soomaaliyeedn, degmo walba waxay leedahay cayaaro hidaha soohdinta dhow ay ku caantahay; galbeed, waqooyi, gobollada dhexe, bari, bartamaha wadanka, koonfur iyo galbeed bari ee Kiinya haysato. Qoralka waa la heli karaa sida uu qabo Ruqasadda Commons ee hindisidda ee marka loo eego la midka ; waxaa soo hoos gali kara qodobo kale.
Waxaan isleeyahay kuwa noocaa. Maqal Soomaalida Minneapolis oo ka faa’ideysaneysa miisaniyadda ka Soomaalida Minneapolis oo ka faa’ideysaneysa miisaniyadda ka.
Tusaale ahaan bal beydad ay is dhaafsadeen Banfis iyo Fakad aan kuusoo dhufto. Qalabkan aad haysato kuma ciyaari kartid maqalkan iyo gxbayada. Magacu wuxuu ka raacay beydkii Dhoodaan ee ahaa: Silsiladdani waxay u dhaxaysay niman xayndaab hoose wadaaga oo ugaaskii u arimin jiray iyo xukunkiisii la isku maandhaafay, dabadeed rag la kala dilay iyo aragtiyo is dabamarsan gabayo badan laga tiriyey.
Kalmad tarbiico leh in gabayga laga dhawro sawtay muhiimka ahaan jirtay. Iyo qaar kaloo badan, Waxaa sidoo kale hadda soo baxay Webab daneeyay gabayada iyo sugaanta Soomaaliya. Markii cid fariin baan ku wadaa dhagta u saarta uu waayey ayuu mar kale afkiisa furtay oo uu tiriyey gabay ay ku jirtay: Afarta beyd ee ugu dambeeya gabayada abwaanada kale wuxuu Dhoodaan kaga jawaabay dood ay ka mid ahayd todobadan beyd ee hoose.